Nezvedu - IFORCE YEMAHARA EQUIPMENT CO., LTD
IFORCE ZVINOGONESESA ZVINOGONESESA CO., LTD
IFORCE INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD kambani yakazara yakatangwa muna Gumiguru 2001, inozivikanwa mukusimudzira, kugadzira uye kutengesa kwemachira ehombodo. Zvigadzirwa zvikuru zvekambani zvinosanganisira zvinotevera, Flat Yarn Extruder, Cam ichitenderera Mashini, Circular Loom Machine, BOPP Kudhinda Muchina, Lamination Machine, otomatiki Gusseting muchina, Ultrasonic Kuisa chisimbiso Machine, Baling Machine, Waste Yeshangu Bobbin Kuchenesa Machine, Plastic Crusher uye Recycling Granulator etc.Yedu nyeredzi zvigadzirwa, otomatiki Kucheka & Sewing Machine ye PP Yakarukwa Mabhegi, Otomatiki Kucheka & Kudhinda Mashini ye PP Yakarukwa Mabhegi, Otomatiki Kucheka & Kusona & Kupisa Kunopisa Yakabatanidzwa Muchina wePP Yakarukwa Mabhegi, Otomatiki Kusona & Kudhinda Yakabatanidzwa Muchina wePP Yakarukwa Mabhegi , Otomatiki Kucheka & Kusona & Kudhinda Yakabatanidzwa muchina wePP Yakarukwa Mabhegi, otomatiki Kucheka & Kuisa & Kusona Yakabatanidzwa Mashini yePP Yakarukwa Mabhegi uye Kudhinda Muchina weBhegi kuBhegi etc. (Mazhinji acho zvigadzirwa zvepamutemo zvakagadzirwa nekambani), izvo zviri inoshandiswa zvakanyanya mumapakeji zvigadzirwa kubva kumaindasitiri akadai sekuvaka zvinhu, kemikari mainjiniya, kurima, chikafu nedoko. Kubva pane zvese zviri pamusoro, tinogona kupa vatengi neyese mitsara, senge, PP rakarukwa mabhegi kugadzira mutsara, BOPP yekudhinda mabhegi yekugadzira mutsetse, PP zvakajairika ukoshi mabhegi kugadzirwa tambo, PP block block vharuvhu mabhegi yekugadzira mutsara, Mesh mabhegi, Leno mabhegi, Raschel mabhegi ekugadzira mutsara uye Kraft kukosha mabhegi yekugadzira tambo etc.
Iyo Kambani iri munzvimbo yematunhu yezvehupfumi uye tekinoroji yekuvandudza nzvimbo - Jinan Jibei Industrial Park. Iri padyo neguta rekare reJiyang County uye iri pamharadzano ye 220 National Highway, iyo 248 ne 249 Provincial Roads, kumaodzanyemba iJinan-Qingdao Expressway, padyo nekumadokero ndiBeijing - Shanghai yakakwira mota njanji neBeijing - Fuzhou Expressway. Zvakare, Kambani iri makiromita makumi maviri nematanhatu kubva kudhorobha reJi'nan, uye makiromita gumi kubva kuJi'nan International Airport. Zviitiko zviri pamusoro zvinopa traffic iri nyore.
Kubvira payakagadzwa, Kambani yakawana hunyanzvi hwetekinoroji yakasimba uye yakabatanidza kukosha kukuru kwesainzi uye tekinoroji hunyanzvi uye kuunzwa kwematarenda, zvekuti yakakoka Han Zhongshi, aimbova mukuru wehunyanzvi hwesainzi uye injinjini yeSamsung Boka, kutungamira nekutora chikamu muchigadzirwa. dhizaini inokonzeresa kukurumidzisa dhizaini nekuvandudza zvigadzirwa zvitsva uye kushandisa 6 patent dzenyika. Nebasa rekuziva basa re "Hunhu Hwekutanga, Mutengi Chekutanga", vashandi veiyo vakanyatso shandisa iyo ISO9001 mhando sisitimu kuitira kuti mhando yebasa nehunhu hwechigadzirwa zvigone kugutsa zvirinani zvevatengi. Operation musimboti "Zvese zvevashandisi, zvevashandisi vese uye nezvese zvinhu zvevashandisi" zvakatemwa pakagadzwa Kambani. Iyo Kambani inotora chinzvimbo chinotungamira mukuremekedza chiyero chechigadzirwa kuvandudza uye kusangana nezvinodiwa zvemusika zvine shanduko yekushandisa mashandiro uye yepamusoro manejimendi maitiro. Zvigadzirwa zveKambani zvinotora chikamu chegore rega chinowedzera chemusika
uye chengetedza bhizinesi rinomhanya-mhanya. Ivhareji yegore yekukura kwehuwandu hwekugadzira kukosha i38%, uye anopfuura chiuru seti yemidziyo yakaburitswa muna2012, nekudaro yakawana makumi emamirioni ehuwandu hwegore hwekugadzira kukosha. Iyo Kambani inova nyeredzi bhizinesi iyo inogona kusarudzika kusimudzira uye kuburitsa izere-otomatiki magetsi akasanganiswa uye akangwara ekurongedza michina muShandong Province uye kunyangwe China, sezvo Kambani inowana kuvimba uye kugutsikana kwevatengi kuburikidza nenzira chaiyo yekutarisira pfungwa uye chirongwa chenguva refu, yakasimba yekugadzira manejimendi , yakazara yekutarisa zvinoreva, yakasimba technical technical, ine simba yekutengesa network uye yakatendeka sevhisi maitiro.